पर्यटकहरु द्वारा खतरनाक रेल यात्रा - त्यहाँ एक अवसर छ?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » साहसिक यात्रा » पर्यटकहरु द्वारा खतरनाक रेल यात्रा - त्यहाँ एक अवसर छ?
साहसिक यात्रा • अष्ट्रेलिया ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • क्यानाडा ताजा खबर • चीन ब्रेकिंग न्यूज • मनोरञ्जन • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • रुवाण्डा ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
by श्रीलाल मिठ्थापला - eTN श्रीलंका
CN टावर EdgeWalk - छवि सौजन्य cntower.ca को
द्वारा लिखित श्रीलाल मिठ्थापला - eTN श्रीलंका
सामाजिक सञ्जाल, र अझ धेरै परम्परागत मिडिया कोभिड संकट भन्दा पहिले सबै एक हल्ला थियो, जब एक युवा पर्यटक दम्पती को केहि तस्वीरहरु श्रीलंका को अप देश रेल मा झुण्डिएको देखीयो समलैंगिक त्याग मा, रमाईलो पल को मजा लिदै।
त्यहाँ श्रीलंका को पदोन्नति को यस रूप को बारे मा तातो बहस थियो, धेरै मानिसहरु संग यस्तो अभ्यास को खतराहरु को बारे मा कुरा गर्दै।
त्यहाँ चिन्ता थियो कि यसले श्रीलंका को लागी नकारात्मक प्रचार ल्याउँछ यदि केहि खतरनाक हुन्छ।
अप देश मार्ग संगै रेल को सवारी को यो भाग तर्कसंगत संसार मा सबैभन्दा सुन्दर रेल मार्गहरु मध्ये एक हो।
र एकदम सही छ त्यसैले मलाई लाग्छ। म आफैं एक थिए जो कोरस मा सामेल हुनुहुन्थ्यो जसले यस बिरुद्धमा कडा बोले।
जे होस् बक्स बाहिर सोच्दै, म सोच्न को लागी - के हामी यहाँ एक अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं?
नयाँ अनुभव र आज को रोमाञ्चक खोजी पर्यटक
त्यहाँ कुनै संदेह छैन कि समझदार, युवा, अनुभव र को एक नयाँ खण्ड छ साहसिक खोजी पर्यटकहरु, उभरिरहेको र संसारभरि यात्रा। उनीहरु धेरै इन्टरनेट र सामाजिक मिडिया प्रेमी छन्, अधिक साहसी र रोमाञ्चक अनुभवहरु को खोजी मा, र सामान्यतया धेरै पर्यावरण को लागी सचेत छन्। उनीहरु प्राय: अफ-द-पिटिएको ट्र्याक बिदाहरु को अन्वेषण मा देखीन्छन्, उनीहरुको आवश्यकता र चाहना अनुसार व्यक्तिगत रुपमा योजना बनाईएको छ।
युगहरु को माध्यम बाट, मानव जाति अन्वेषण को सीमा धकेलिएको छ: हामी भूमि, समुद्र र अन्तरिक्ष कब्जा गरेका छौं। हामीले ज्ञान को लागी हाम्रो प्यास तिर्खा संगै हाम्रो ग्रह को धेरै अज्ञात आश्चर्यहरु पत्ता लगाएका छौं।
पर्यटकहरु फरक छैनन्। आफ्नो दैनिक तनावपूर्ण दैनिक जीवन बाट टाढा जानको लागी, उनीहरु केहि फरक खोज्छन्, शत्रुतापूर्ण वा खतरनाक ठाउँहरुमा उद्यम गर्न को लागी खोज को उत्तेजना र साहसिक को भावना को अनुभव गर्न को लागी। अब सुविधाहरु, राम्रो खाना, र केहि पर्यटकहरु को लागी पर्याप्त राम्रो घाम को एक दायरा संग एक सफा होटल कोठा हो।
Booking.com को अनुसार, भौतिक सम्पत्ति मा अनुभवहरु को लागी तृष्णा को लागी यात्रुहरु को अविश्वसनीय र अविस्मरणीय यात्राहरु को इच्छा लाई ड्राइभ गर्न जारी छ: यात्रीहरु को ४५% मन मा एक बाल्टी सूची छ। एक बाल्टी सूची मा देखा पर्ने सम्भवतः रोमाञ्चकारी एक विश्व प्रसिद्ध थीम पार्क, एक महाकाव्य रेल यात्रा मा जाने को लागी यात्री, वा एक रिमोट वा चुनौतीपूर्ण स्थान मा जाने यात्रा गर्न चाहने रोचक चाहनेहरु छन्।
मनोविज्ञान मा ड्राइभ-कमी सिद्धान्त postulates कि एक पूर्ण पूर्ति को एक राज्य मा कहिल्यै छ, र यस प्रकार, त्यहाँ सँधै सन्तुष्ट हुन आवश्यक छ कि ड्राइव छन्। मानिसहरु र अन्य जनावरहरु स्वेच्छाले आफ्नो अज्ञात वातावरण को अन्वेषण गरेर तनाव बढाउँछन्, आत्म-उत्प्रेरित तनाव, र आफ्नो आराम क्षेत्रहरु बाट बाहिर सार्दै। यसले उनीहरुलाई उपलब्धि र आत्म सन्तुष्टि को भावना दिन्छ।
अज्ञात रोमांच, रोमांच र एड्रेनालाईन भीड को लागी यात्रुहरुलाई आकर्षित गर्दछ।
अन्य देशले के गरेका छन्?
उल्लेखित रूपमा, धेरै देशहरु आफ्नो उत्पादन को पेशकश मा अद्वितीय, यादगार, र रोमाञ्चक अनुभवहरु को विकास गरीरहेका छन्। केहि तल वर्णन गरीएको छ।
सिडनी हार्बर पुल संगै हिड्नुहोस्
साना समूहहरु विशाल, धनुषाकार इस्पात संरचित सिडनी हार्बर पुल संग एक पैदल यात्रा मा लिइन्छ। नाटकीय 360 डिग्री। पुल बाट हेर्नुहोस्, १३५ मिटर माथिको, बन्दरगाह को, र नजिकैको सिडनी ओपेरा घर, जबकि तत्वहरु को लागी पुरा तरिकाले उजागर भएको हो वास्तव मा एक दुर्लभ र रोमाञ्चक अनुभव हो।
Coiling ड्रैगन क्लिफ skywalk, Zhangjiajie, चीन
चीनको हुनान प्रान्त को उत्तरपश्चिम मा, आगन्तुकहरु आराम संग टियांमेन माउन्टेन संग जोडिएको पैदल बाटो संग टहल्न सक्छन् - जमीन बाट ४,०० फिट।
गिलास को तल हिड्ने बाटो ३०० फिट भन्दा लामो र मात्र पाँच फिट चौडा छ, एक अनुभव हो कि उत्साहजनक र डरलाग्दो भनिन्छ प्रदान गरीरहेको छ।
सीएन टावर EdgeWalk, क्यानाडा
टोरन्टो मा अग्लो आकर्षण मान्छे सीएन टावर को किनारा मा सही उभिन र माथि झुकाउन दिन्छ। यो संसारको सबैभन्दा अग्लो पूर्ण सर्कल हो, टावरको मुख्य पोड, ३५1.5 मिटर, जमिन भन्दा माथि १356 कथाहरु को घेरामा रहेको १.५ मिटर चौडा लेज मा ह्यान्ड्स-फ्री पैदल। EdgeWalk एक क्यानेडियन हस्ताक्षर अनुभव र एक ओंटारियो हस्ताक्षर अनुभव हो।
रुवाण्डा मा गोरिल्ला सफारी
रुवाण्डा र युगान्डा मा अद्वितीय ट्रेकि opportunities अवसरहरु को एक किसिमले तपाइँ जंगल मा ट्रेक गर्न को लागी गोरिल्लाहरु को आफ्नो प्राकृतिक वासस्थान मा आँखा हेर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यो एक बिल्कुल अद्वितीय अफ्रिकी सफारी अनुभव हो। यो पल एक स्थायी र अविस्मरणीय छाप यस राजसी जंगली जनावर को नजिक आउँदैछ।
यी केहि मात्र हुन्। तेसैले त्यहाँ पहिले देखि नै अद्वितीय, आगन्तुक आकर्षणहरु को एक श्रृंखला हो कि पर्यटकहरु लाई दुनिया भर मा रोमाञ्चक छन्।
सुरक्षा - एक ओवरराइडिंग शर्त
यी सबै रोमाञ्चक खोज्ने र प्रतीत हुने खतरनाक पर्यटक आकर्षणहरु एक साझा विभाजन छ कि कहिल्यै सम्झौता गरीएको छैन-सुरक्षा।
सुरक्षा यी सबै गतिविधिहरु मा सर्वोच्च महत्व को छ र कडा जाँच र समय समयमा समीक्षा को विषय हो। सबै कर्मचारीहरु जो मार्गदर्शन र यी रोमाञ्चकारी पर्यटकहरु लाई निर्देशन दिईन्छ राम्रो प्रशिक्षित र अनुशासित छन्।
कुनै पनी उपकरणहरु कि सुरक्षा को लागी उपयोग गरीन्छ जस्तै हार्नेस र सुरक्षा बेल्ट उच्चतम मापदण्डहरु को लागी डिजाइन गरीएको छ र समय समयमा परीक्षण गरीन्छ। केहि मौका छोडिएको छैन र यदि कुनै अप्रत्याशित पर्यावरणीय परिस्थितिको कारण खतरा को एक सानो झलक छ, आकर्षण अस्थायी रूपमा बन्द छ। (उदाहरण को लागी, जब तेज हवाहरु छन्, सिडनी हार्बर पुल पैदल निलम्बित छ)।
यस्तो सुरक्षा उपाय एक अनिवार्य आवश्यकता हो, किनकि कुनै अप्रत्याशित दुर्घटना ले मुद्दा को गंभीर र गम्भीर नतिजा निम्त्याउन सक्छ र यहाँ सम्म कि आकर्षण को बन्द गर्न को लागी।
त्यसोभए हाम्रो रेल सवारी को बारे मा?
श्रीलंका upcountry रेल सवारी को आकर्षण (प्राय: Nanu Oya र एला को बीच - सबैभन्दा दर्शनीय खण्ड) यो तथ्य हो कि एक पर्यटक खुल्ला रेल carriageway ढोका को footboard मा खडा हुन सक्छ र अवशोषित गर्दा आफ्नो अनुहार को बिरूद्ध चिसो हावा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर पहाडी देश र चिया बगान। यो केहि पश्चिमी पर्यटकहरु घर फिर्ता गर्न सक्दैनन्, जहाँ सबै ट्रेन carriageway ढोका स्वतः बन्द हुन्छ जब ट्रेन चल्न थाल्छ।
वास्तव मा मलाई भनिएको छ कि अष्ट्रेलिया मा केहि टूर एजेन्टहरु लाई विशेष गरी पर्यटकहरु लाई उनीहरु को लागी यो अनुभव को व्यवस्था गर्न को लागी सोधिएको छ, जब आफ्नो यात्रा बुकिंग।
त्यसोभए किन रचनात्मक नहुनुहोस् र यस बाट उचित आकर्षण बनाउनुहोस्?
के हामी एउटा गाडीलाई परिमार्जन गर्न सक्दैनौं छेउमा खुला बालकनी जहाँ एक व्यक्ति बाहिर उभिन र खुला वातावरण महसुस गर्न सक्छ? यो उचित सुरक्षा रेल संग फिट हुन सक्छ र प्रत्येक व्यक्ति एक हार्नेस संग गाड़ी को लंगर गर्न सकिन्छ (जस्तै अन्य आकर्षणहरु मा जहाँ अन्तरक्रिया तत्वहरु को लागी खुला छ प्रयोग गरीन्छ)। यो अनुभव को लागी एक विशेष शुल्क लगाउन सकिन्छ।
एउटा कारक जुन सुरक्षा पक्ष को पक्ष मा छ यो हो कि यो खिच्न को लागी, ठाडो ढाल को कारण, रेल एक घोंघा को गति मा यात्रा गर्दछ, विदेशी देशहरु को विपरीत जहाँ गति प्रति घण्टा 80-100 किलोमिटर पुग्न सक्छ।
यो आकर्षण रेलवे विभाग को लागी एक आय जनरेटर को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ पर्यटकहरु को रूप मा यो रोमांच को अनुभव गर्न चाहने पर्यटकहरु लाई एक निश्चित समय अवधि को लागी कि उनीहरु सुविधा को उपयोग गर्न सक्दछन्, शुल्क तिर्न सकिन्छ।
जे होस् यो सरलीकृत लाग्न सक्छ, वास्तविकता मा त्यहाँ धेरै तार्किक मुद्दाहरु हो कि सम्बोधन गर्न को लागी हुन सक्छ।
तर यदि त्यहाँ एक इच्छा छ, र विभिन्न विभागहरु सम्बद्ध सबै अवसर देख्न सक्छन्, र एकै तरंगदैर्ध्य मा प्राप्त गर्न सक्छन्, सामान्यतया प्रचलित असाधारण नौकरशाही को माध्यम बाट काटेर, तब पक्कै यो पनी गाह्रो हुनेछैन।
तर यस सम्पूर्ण ग्रन्थ मा समग्र बिन्दु, यो हो कि हामीले बाकस बाट बाहिर सोच्नु पर्छ र उपलब्ध सबै सम्भावित अवसरहरु लाई बुझ्नु पर्छ, विशेष गरी जब हामी बिस्तारै महामारी पछि पर्यटकहरु को लागी खोल्छौं। हामी धेरै ranting र प्रचलित सबै कमीहरु को बारे मा raving को लागी प्रयोग गरीरहेका छौं। तर त्यहाँ यति धेरै छ कि अझै पनी गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ केहि प्रेरित र समर्पित व्यक्तिहरु जो एक साथ प्राप्त गर्न सक्छन्।
पर्यटन पछि सबै साँच्चै व्यापार देखाउन र रचनात्मकता, panache, अभिनेता, र showmanship बिना, शो व्यापार के हो?
श्रीलाल मिठ्थापला - eTN श्रीलंका